Efa misy anefa ny vahaolana fohy ezaka amin’izao fotoana izao, araka ny tatitry ny solombavambahoaka, Andry Ratsivahiny amin’ny fampidirana rano. Amin’ny faritr’Itaosy manokana iny izao dia nanambara ny tenany fa efa misy ny fandavahana na ny forage miisa 6 ao amin’ny kianjan’Antsahamasina izay ezahana hovitaina tanteraka afaka 1 volana sy tapany. Ireo izany aloha no ahafahana hamatsy rano an’Itaosy mandrapahavitan’ny vahaolana maharitra izay andrasana hatramin’ny volana desambra. Tahaka izany ihany koa, hisy ny faritr’Andoharanofotsy, Mahalavolona, Ambohijanaka izay efa hanaovana ezaka ihany koa ankehitriny. Misy ny fanaovana ny lakan-drano sy tohadrano hovitaina amin’ity taona ity izay voafaritra ao anatin’ny Politika Ankapoben’ny Fanjakana eny amin’ny faritra Ampanefy sy Soalandy izay ahafahana manondraka tanimbary ana hektara maro.